Waxyaabaha loo yaqaan 'Graphite' ee warshadda uumiga aluminium | Shiinaha Graphite waxyaabaha loogu talagalay soosaarayaasha uumiga aluminium, Alaab-qeybiyeyaal
Noocaan garaafyada garaafka leh ayaa si gaar ah loogu adeegsadaa soosaarida filimka aluminium dahaarka leh ee ku jira xaalad faaruq ah. Tayada garaafka la duubay ayaa si weyn u saameyn doonta tayada filimka iyo qiimaha wax soo saarka. Uumiga uumiga wasakhda ah ee aluminiumku waa geedi socod ku hoos jira xaalad faaruq ah si loogu daboolo aluminium alwaaxda filimka si loo sameeyo filim isku dhafan. Sida substrates sida BOPET, BONY, BOPP, PE, PVC, uumi wareejinta uumiga tooska ah sida caadiga ah ayaa badanaa la adeegsadaa. Nidaamka uumiga uumiga faaruqinta ah ee aluminiumku u baahan yahay wuxuu u baahan yahay garaaf garaaf leh oo tayo sare leh, waxaanan awood u leenahay degganaansho iyo adeegsi tayo leh.
Garaafka la dareemay wuxuu u qaybsan yahay qaab garaaf garad ku dhisan oo la dareemay, polyacrylonitrile based (PAN-based) graphite dareemay, iyo graphite ku saleysan viscose ayaa dareemay xulashada kala duwan ee asalka ah. Ujeedada ugu weyn ayaa ah in loo isticmaalo sida ilaalinta kuleylka iyo qalabka kuleylka kuleylka ee foornooyinka dhalaalaya monocrystalline. In warshadaha kiimikada, waxaa loo isticmaali karaa sida wax filter a for-daahirnimo sare reagent kiimikada reagents.
Kaarboon la dareemo ayaa ah garaaf la dareemay ka dib markii lagu daweeyay heerkul sare oo kor u dhaafaya 2000 ℃ oo ku hoos jirta faaruq ama jawi aan firfircooneyn Waxyaabaha kaarboonku ka kooban yahay ayaa ka sarreeya kaarboonka la dareemo, oo gaara in ka badan 99%. Dhamaadkii 1960s, garaaf ayaa dareemay in horeyba looga heli jiray adduunka. Dareenka garaafku wuxuu u qaybsan yahay qaab-dhismeed, polyacrylonitrile-ku-salaysan garaafka dareeraha ah iyo garaafka ku-tiirsan viscose-ka ee la dareemay xulashada kala duwan ee dareenka asalka ah.
Doonta Garaafka Labaad, Iskuduwaha Garaafka, Weelka Kaarboon Garaafka, Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah, Garaafka Sawirka, Qaybaha Dayactirka Graphite,